Lolwandle Olumnyama uhambo (Ochakov): ukuzilibazisa, amasevisi, amanani
Edolobheni eliseningizimu Ochakov (Ukraine, Mykolaiv esifundeni), emngceleni woLwandle Olumnyama, futhi izivakashi asemaqeleni zemvelo nokongiwa izindawo landscape, khulula olunesihlabathi esisuka infinity. Uma libalele nomndeni wonke, ungavakashela epaki amanzi, yayincane, kodwa ahlanzekile kakhulu, okuyinto uyaziqhenya komuzi Ochakov. Nezokungcebeleka izindawo simelwa ukunakwa izivakashi, ngoba lapha zonke izinto kusakhiwa ne Ukugcizelelwa nenduduzo esiphezulu.
Njalo ukuphumula ngonyaka oLwandle Olumnyama, edolobheni Ochakov, ukuza ezingaphezu kuka 17 eziyinkulungwane. Izivakashi. Edolobheni resort kukhona amathilomu eziningi, izimakethe, izitolo kanye ngisho club diving. At the site ungakwazi ukujabulela uhla hambo: izintaba izintaba esiqiwini Kinburn Amathe, ukudoba ngesikhathi esiqhingini Berezan, uthathe uhambo oluya Museum umlando nemivubukulo "Olvia" - idolobha yalahlwa amaGreki ku IV ekhulwini BC.
Izici kwendawo yokungcebeleka
Kuyamangalisa ethule futhi ephephile Black Sea kuyinzuzo ecacile izivakashi abanquma uvakashele Ochakov. izikhungo nezokungcebeleka kulezi zingxenye isondelene kuya ogwini. Kulabo abasebenza ukubukela izinto zemvelo oluthukuthele, kule ndawo akunakwenzeka ukuba uvumelane, kusukela amagagasi kuyaqabukela ziphazamisa bushelelezi ulwandle ebusweni. Buhle resort akuyona kuphela isihlabathi segolide ogwini, kodwa futhi phansi sandy we bay. Futhi izingane kanye nabantu abadala mnandi ukuba azulazule kanye ezinye bengafaké zicathulo amanzi ngaphandle kokwesaba amatshe acijile amatshe okuqinile.
Izindleko izindlu ezizimele Ochakov iqala kusukela 40 hryvnia indawo ngayinye futhi kusukela 200 hryvnia ngoba indlu encane, kubantu abangu-3 (amazinga nsuku zonke). Endaweni ezisemadolobheni Ubuye eziningi izikhungo izivakashi ezincane kanye zokungcebeleka.
Nezokungcebeleka isikhungo "Dynamo" (Ochakov)
amanani ezingabizi inikeza ukuzijabulisa FSO "Dynamo", esemgwaqweni at ul. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona. Ongawabhuka amagumbi 75 hryvnia ngelanga, kokubili izakhiwo isitini futhi Cottages encane. It inikeza izivakashi a enkantini, kathathu ngelanga izobiza 100 hryvnia. Izinzuzo resort kukhona indawo enkulu avaliwe cishe 3 amahektha, ezemidlalo kanye zezingane zokudlala, ibanga elilingana nenkundla kanobhutshuzwayo. Kukhona nokufinyelela kwangasese ebhishi, ulwandle alley ukubopha kanye ezitebhisini ezitshekile.
Pension "Villa Madrid»
Kukhona futhi zokungcebeleka ezibizayo xaxa edolobheni ezifana Ochakov. Nezokungcebeleka isikhungo on insimu yalo okuhloswe ngazo izingxenye ezahlukene sabantu. Ngokwesibonelo, boarding indlu yangasese "Villa Madrid». Itholakala kwi resort ngaphandle. Inani lentengo ngekamelo iqala kusukela 250 hryvnia. Sasekuseni, ukudla kwasemini kanye sokudla ibha izobiza i eyengeziwe 200 hryvnia ngosuku umuntu ngamunye. amasevisi Ihhotela kanye izakhiwo - sauna, swimming pool, izoso, ingadi nge nemithombo izitshalo ezingavamile.
The main resort ukuphila eligxile Black Sea Amathe (Ochakov). Nezokungcebeleka izikhungo ( "Witted", "Troyanda", "Talisman" kanye nabanye) zitholakala kule ndawo. Ngakolunye uhlangothi it is wageza ngu woLwandle Olumnyama, futhi ngakolunye - Berezan Estuary. Abantu bendawo ukushayela kule ndawo ugu Chernomorka. Lapha, 5 km kusuka Ochakov, kukhona imigoqo eziningi, izindawo zokudla, ema-disco, kanye nezindawo zezivakashi, eyenzelwe noma iyiphi imali engenayo kanye ukunambitheka.
iholide Akubizi inikeza ukuzilibazisa "Witted", etholakala ekupheleni Sea Amathe. I ivulekile endaweni eluhlaza inikeza amaholide ezingaphezu kuka Cottages 200 abiza kusuka 50 hryvnia ngosuku. Ukupheka kwenziwa emakhishini eziningana nge amafriji negesi wachitha. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka oda ukudla ekamelweni lokudlela noma ibha.
Nezokungcebeleka isikhungo "Witted" ngaphansi Ochakov enye enkulu futhi ehlanzeke olunesihlabathi ezikhangayo nokuzijabulisa zasolwandle. Ukuze ukuphepha izivakashi ukubukela esiteshini wokutakula, lapho ungakwazi futhi ukuqasha izikebhe, catamarans sigibela ezikebheni.
Kule ndawo, kukhona omunye ethandwa ukuzilibazisa isikhungo - "Santa" (Ochakov). It is a uhlobo isiphetho ukufana cottage. The yokungcebeleka kuyinto cishe elisha sha, kwakungakabi engu-10 ubudala, ngakho zonke izindlu zisesimweni esikahle futhi ithala ivulekile, ifakwe amafriji, air conditioning, kanye zokugezela ziye zanikezela ukufinyelela ku-intanethi. Izakhamuzi "Santa" bangahlala amabhishi ezimbili: impahla anesihlabathi yomphakathi, phezu esizalweni somfula. Ibanga ebhishi kokubili esingaphansi 50 m. Impahla Rental Value ongaphakeme futhi ivela 70 hryvnia ngosuku. kathathu ngelanga izobiza 150 hryvnia ngosuku umuntu ngamunye.
Nezokungcebeleka isikhungo "Santa" eduze Ochakov has Ukushisa ebusika namanzi unyaka wonke hot, ngakho ngisho isizini abandayo ungakwazi ukuchitha iholide lakho oLwandle Olumnyama, e cottage efudumele futhi ethokomele nge mini-bar, izoso e Gazebo phezu hlupha futhi uthathe ukungcebeleka ogwini.
Holiday Village "Neptune" (Ochakov)
Maphakathi Sea Amathe, 5 km kusuka Ochakov elise ukuzilibazisa isikhungo "Neptune". Kuhlala ekhatsi Cottages abiza kusuka 60 UAH. ngomuntu ngamunye ngosuku, ukudla - kusuka 170 UAH. The yokungcebeleka usebenza cinema ehlobo, etholakala eduze isizinda we-nightclub ethile "kusho uCaptain".
Emnyango Ochakov Lolwandle Olumnyama ogwini epaki amanzi, "Attica" kanye ehhotela eponymous, lapho amaholide ukufinyelela ngqo amaslayidi amanzi namachibi. On endaweni spa "Attica" endaweni izici sauna Finnish, namabhati Turkish, ikamelo massage and igumbi Billiard. The elingaphakathi ahlotshiswe isitayela ngesiGreki, namakamelo abanzi abiza kusuka 450 hryvnia ngelanga kungathatha kufika abantu 5.
Ochakov, ukuzilibazisa izikhungo, izindawo zokungcebeleka, Villas okuyinto ezimele wonke umuntu ukuze ujabulele, ngaphandle kokukhetha. Inala ongakhetha kusukela umnotho ukuze Deluxe amakamelo kuzovumela ukuba uphumule ngokugcwele futhi ujabulele ubuhle ogwini.
Izici Tverskaya Metro Station
Otorten - ntaba, engasempumalanga edume
ECrimea ngo-September: ukubuyekezwa. Lapho kangcono uphumule eCrimea ngo-September?
Ibhuloho Hangzhou e China
Ukugcwalisa i Kurnik: zokupheka inkukhu, amakhowe futhi amazambane. Izimfihlo ukupheka Kurnik
Legend of Day Valentine - indaba mayelana amandla umoya womuntu, owazi indlela ukuthanda
Sokuhlasela kwamasosha omzimba kolwelwesi: Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Clutch inceku isilinda Oise: ukulungiswa futhi esikhundleni
Biography of Thomas Mann, amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Izakhiwo ewusizo iparsley Izimo
Indlela ukuxhuma umugca kusuka umugqa, kanye eluka?
Steel agesi: ukukhiqizwa nokusetshenziswa
Tanya: igama ukubaluleka, imvelo kanye ikusasa
Puller for ibhola amabombo: incazelo kanye nezinhlobo